लोकतन्त्र र प्रतिपक्षी - परिहास - नेपाल
देशमा एक पटक फेरि प्रतिपक्षीको खोजी भएको छ । यति धेरै घटना र दुर्घटना देशमा भइरहेका छन् । तर प्रतिपक्षी चुँ पनि बोल्दैन । देशमा साँच्चै प्रतिपक्षी नभएकै हो कि क्या हो ?
वास्तवमा प्रतिपक्षी नभेटिनु सानो कुरा होइन । लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षी नहुनु भनेको त अत्यन्तै खतरनाक पो हुन्छ । किनभने लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार नभए पनि बरु केही हुँदैन, प्रतिपक्षीचाहिँ हुनैपर्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेकै प्रतिपक्षीसहितको व्यवस्था हो । सरकार भनेको त जुनसुकै व्यवस्थामा पनि हुन्छ । राणाको व्यवस्थामा पनि सरकार थियो । पञ्चायती व्यवस्थामा पनि सरकार थियो । त्यो दुवै व्यवस्थामा नभएको त प्रतिपक्षी मात्रै हो ।
कालान्तरमा दुवै व्यवस्था ढले । यी दुवै व्यवस्था ढलेपछि नयाँ जो व्यवस्था आयो, त्यसको प्रमुख आकर्षण भनेकै प्रतिपक्षी हो । किनभने यो व्यवस्थामा प्रतिपक्षी पनि छ, त्यही भएर त यसलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनियो । यदि प्रतिपक्षी नभएको भए यसलाई कसरी लोकतान्त्रिक व्यवस्था भन्ने ? व्यवस्था लोकतान्त्रिक हो कि होइन भनेर छुट्याउनलाई पनि त कुनै न कुनै मापदण्ड चाहियो नि । त्यो मापदण्ड भनेकै प्रतिपक्षी हो । होइन भने पञ्चायती व्यवस्था र यो व्यवस्थामा के फरक छ ? पञ्चायतमा प्रतिपक्षी थिएन । अहिले प्रतिपक्षी छ । यत्ति होइन फरक ? नेपालमा लोकतन्त्र पनि छ भनेर देखाउने एउटै मात्र वस्तु भनेकै प्रतिपक्षी हो । अब त्यो पनि लोप भयो भने कहाँ देखाउने लोकतन्त्र ?
प्रकाशित: श्रावण २३, २०७६